दक्षिणकाली भगवतिको दर्शन गराै ! मनकाे इच्छा पुरा हुन्छ – Naya Kura Daily
September 9, 2020 63
एजेन्सी : हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने, यो धर्म मान्नेहरुका लागि शक्तिपीठहरुको विशेष महत्त्व हुने गर्छ । शक्तिपीठहरुको स्थापना र तिनको पूजा गर्ने प्रचलनले कुनै वेला समाज व्यवस्थामा मातृसत्ताको प्रभुत्व रहेको तथ्यलाई औंल्याउँदछ । हिन्दू धर्म मान्नेहरुले सामान्यतः शक्तिपीठहरुको अराधाना सदैव गर्ने गर्छन् । अझ दशैं आएपछि त शक्तिपीठहरुमा झनै विशेष आराधना, पूजापाठहरु गर्ने गरिन्छ ।
Prevघरको कुन दिशामा कुन बिरुवा रोप्ने ?
Nextस्विडेनमाथि पोर्चुगलको सहज जित, रोनाल्डोको कीर्तिमानी गोल
बाबु गुमाएको २० दिनपछि कोरोना संक्रमणबाट छोरीको मृत्यु